WARAYSI XIISO LEH: Maxaa kala Qabsaday TARSAN Iyo Xamdi Kadiye “Guri la’aan ayaan ahay, Dhaqaalle ma haysto” | KALSHAALE
WARAYSI XIISO LEH: Maxaa kala Qabsaday TARSAN Iyo Xamdi Kadiye “Guri la’aan ayaan ahay, Dhaqaalle ma haysto”
Feb 12, 2019 - 1 Aragtiyood
Nairobi ( Kalshaale ) Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamed Nuur Tarsan ayaa Waraysi Xiiso badan waxaa la yeelatay Wariye Xamdi Kadiye , oo ka howl gasha Telefishinka Universal Wuxuuna shaaca ka Qaadiy Arimo badan.
Tarsan ayaa sheegay inaysan jirin wax dhaqaale ah oo ku filan oo lagu socodsiiyo howlaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, Taasi oo ka dhigan inaysan lahayn wax miisaaniyad ah oo ku filan.
Waxa uu intaas ku daray, in inta badan ay isku dabaraan lacagta laga helo baasaboorka Soomaaliga ee ay u sameeyaan dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Kenya.
HALKAN KA DAAWO WARAYSIGA IYO SAFIIR TARSAN
Tarsan ayaa dhinaca kale sheegay in xitaa uusan haysan Guri uu dego oo uu ku noolaado safiir ahaan. “Aniga laba qol inta aan ka dhex dhisto safaaradda waan degi karaa, balse taas sharaf maaha, Waxaa sitaa Calankii Qaranka oo aan Metelayaa, Safiirka wuxuu u baahan yahay guri karaamo leh, oo uu ku casuumi karo safiirada kale, sida isagaba loo casuumo” ayuu yidhi Tarsan.
“Aniga oo safiir ah ma waxaan dhex degaa laba qolo oo apartment ah, waxaas ma sharaf baa, haddii ninkii ugu sarreeyey waddankan (Safiirkii) uu yahay homeless (guri la’aan) waa dhibaato” ayuu yiri.
Somalida daanyeernimadooda, waxeey rabaan kuligood in eey noqdaan public workers, oo dowlad magaceeda ku shaqeeyaan, waxna ku cunaan. Sababtoo ah, daanyeerkii kaligiis taliye madaxweeyne Siyaad Barre, ayaa dadka barray in qofkii dowladda u shaqeeya uu ka buuran yahay dadka kale, sababtoo ah, xoolo uusan shaqeeysan, isaga oo shaqo fiican qaban ayuu cunayaa. Taas ayaana ugu wacan in daanyeerta Somalida kuligood rabaan in dowlad u shaqeeyaan. Waa sababta qabiil walba u sameeystay madaxweeyne bug ah, golle wasiir, xildhibaano, iyo wax lamid ah. Tii daanyeernimada ee dowladda dhexe ayaa ku filnaan weeysay.
Daanyeernimadaas dad fahamsann waa yaryahiin. Sidee beey ku dhacee, dal dhan, oo qof kasta magac dowlad wax in uu ku cunno rabba. Daanyeer. Kuwa qurbahana, waa sababta eey u yahiin Somalida dadka ugu badan ee ceeyrta qaata, marka loo fiiriyo “proportions to their numbers” tirada dadkooda iyo inta ka qaadata Ceeyr. Waxaa kaloo jirra kuwa kaloo badan oo “fraud” musuqmaasuq lacag ugu xaddo day care, adult day care, home care, meelaha caruurta lagu hayo, meelaha dadka waaweeyn lagu hayo, iyo meelaha dadka caafimaad maskax amaba jir uu heeysto.
Waa daanyeer u badan tuugo. Culumadoodana ma soo hadal qaadaan, maroodigaan qolka ku dhex jirra. 24 saac waxeey ka sheekeeyn falastiin iyo israil, oo wax ka galay eeysan jirrin.